SAWIRRO: Cabdi Iley oo Ardaydiisi looga dhigey Madaxweynaha cusub ee Soomaalida Itoobiya!! – Xeernews24
SAWIRRO: Cabdi Iley oo Ardaydiisi looga dhigey Madaxweynaha cusub ee Soomaalida Itoobiya!!
Madaxweynaha cusub ee loo magacaabay Is-maamulka Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Cabdi Maxamed (Ilka-case) ayaa ah wiil dhalinyaro ah oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha xilka laga tuuray Cabdi Iley.
Axmed Cabdi Maxamed waa 32 sanno jir isagoo dhashay sanadkii 1986, wuxuuna kasopo jeeda Beesha Ogaadeen, gaar ahaan reer Cabdulle; waxaana maanta loo magacaabay xilka markii uu is casilay madaxweynihii DDSI Cabdi Maxamuud Cumar oo cadaadis ba’an uu saarnaa muddooyinkii ugu danbeeyay.
Madaxweynaha cusub ayaa hore u ahaa wasiirka Maaliyadda, wuxuuna si weyn ugu dhowaa madaxweynaha xilka banneeyay ee Cabdi Iley, isagoo wareysigii ugu horeeyay ee uu bixiyey ku sheegay inuu ku socon doono isbedello ballaadhan oo uu hore ugu dhawaaqay Cabdi Iley.
Ninka dhalinyarada ah ee noqday madaxweynaha maamulka DDSI Axmed Cabdi Maxamed wuxuu sanadkii 1986 ku dhashay degmada Garbo ee Gobolk Fiiq, wuxuuna wax ku bartay jaamacadaha Diridhaba iyo Bahardar, isagoo markii ugu horeysay magaalada Godey ka noqday madaxa Maaliyadda
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/57.jpg 736 719 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-06 21:32:382018-08-06 21:32:38SAWIRRO: Cabdi Iley oo Ardaydiisi looga dhigey Madaxweynaha cusub ee Soomaalida Itoobiya!!
Cabdi Iley oo Xilka xoog looga Tuuray Deg-Deg: Cabdi Iley oo lugta la galay godkii loogu tala galay.